उपत्यकाका ट्याक्सी चलाकलाई ड्रेस | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
उपत्यकाका ट्याक्सी चलाकलाई ड्रेस
आज करिव ३ सय ड्राइभरले युनिफर्म लगाए
प्रकाशित मिति ६ भाद्र २०७५, बुधबार १५:४३ लेखक nepali janta
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सी चलाकले बुधबारदेखि युनिफर्म लगाएका छन् । बुधबार दिउँसो उपत्यकाका करिव ३ सय ड्राइभरले युनिफर्म लगाएर यात्रुलाई सेवा दिएका छन् । पहेँलो कपडामा राति टल्किने सेतो रिबन राखेर ड्रेस तयार पारिएको छ । उक्त ड्रेसलाई मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघले ‘फ्लोरोसेन्ट ड्रेस’ भनेको छ ।
संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतमका अनुसार एउटा ड्रेसको ३ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । ड्रेस तयार पार्न धेरै टेलर्समा सम्पर्क गरेर मूल्य बुझिएको र सबैभन्दा सस्तोमा एलबी टेलर्सले सिलाइदिने भएपछि उसैलाई ड्रेस बनाउने जिम्मा दिइएको छ । टेलर्सका प्रोपाइटर एलबी परियाका अनुसार आज दिउँसोसम्म ५ सय ५० वटा ड्रेस तयार पारेर राखिएको छ । अर्डर अनुसार ड्रेसको परिणाम थपिँदै लगिने उनले बताए ।
यस्तै अब उपत्यकाभित्र ट्याक्सी चलाउने चालकले १ महिनाभित्र अनिवार्य ड्रेस लगाउनै पर्ने गौतमको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको समन्वयमा देशैभरीका ट्या्कसी चालकलाई ड्रेस अनिवार्य गरिने छ ।
यस्तो ड्रेसले यात्रुलाई ट्याक्सी चालक र अन्य सवारीसाधनको चालक छुट्ट्याउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । उनले नीजि सवारी साधनले पनि भाडाको काम गरेपछि आफूहरुले ड्रेस कोड बनाएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि पैसा लिएर भाडाको काम गर्न थाले । जसले गर्दा यात्रुहरु भ्रममा परेका छन् । अब ड्रेस लगाएपछि यो भ्रम तोडिनेछ । नीजि सवारीको काम पैसा असुलेर यात्रु चढाउने हैन ।’
ड्रेसले ट्याक्सी चालकलाई थप अनुशासित बनाउने उनले बताए । उनले भने, ‘ड्रेसले व्यवसाय र व्यवसायीलाई अनुसाशित बनाउनुको साथै यात्रुलाई पनि सुविधा पुग्नेछ ।’
मोदीले उच्चारण गरेनन् नाकाबन्दी शब्द, न मागे माफी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नाकाबन्दी’का विषयमा आफ्नो मन्तव्यमा मुखै खोलेनन्।
आज संसद वैठक, मुठभेडका लागि यस्तो छ तयारी
काठमाठौं । आज संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मुठभेड…
शव चिरफार गर्ने आरोपीलाई पक्राउ गर्न पुगेका प्रहरीमाथि गरे स्थानीयले आक्रमण
काठमाडौं। गोरखाको धार्चे गाउँपालिका ६ काशीगाउँमा शव चिरफार गर्न संलग्न रहेका युवालाई नियन्त्रणमा लिन पुगेका प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ।
लेडिज ब्यागदेखि पूजा सामग्री चोरी गर्ने चारजना पक्राउ
काठमाडौं । ठूलो संख्यामा पकेटमार पक्राउ परेको केही दिनमै प्रहरीले चोरको अर्काे समूहलाई पक्राउ गरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त…
खै के गरे मातृकाले ? तीन महिनामा ३ डिजी फेरिए,नतिजा शुन्य
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री मातृका यादवले उद्योग विभागका प्रमुखलाई पदबाट हटाएका छन् । मन्त्री यादवले तीन महिनाको अवधिमा तीन जना…
विद्यार्थीका लागि रोजगार आजको आवश्यकता
आज गाउँबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं आएका विद्यार्थीहरुले यहाँ कति संघर्ष गर्छन् होला त ?
नेपालकै ठूलो खुकुरी
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 21 views
ससुरा बा ! (कथा) 17 views
नेपालमा कुन दिन हिँसा भडि्कन्छ थाहा छैन: रामप्रसाद खनाल 12 views
नेपालकै ठूलो खुकुरी 11 views
हातहतियार मुद्दाका तीन अभियुक्तलाई कैद 10 views
चीनमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार पुग्यो 8 views
सेक्स गर्ने चाहना हुँदा युवतीले कस्तो संकेत देखाउछन् ? जान्नुहोस।5views